Injongo 'Yokujikeleza' ekuPhumeni kweMpi
Ukusetyenziswa kwepilisi-kuquka ukuzingela, ukhuphiswano lokudubula, kunye nezicelo zobungcali ezifana nomkhosi okanye ukuthotyelwa komthetho-ixesha elijikelezayo libhekiselele kwiyunithi enye yamabutho ngaphambi kokuba isuswe. Nangona ngamanye amaxesha esetyenziswe ukubhekisela kwi-bullet projectile, oku kusetyenziso olungalunganga.
Ngompu osebenzisa i-cartridge-style-ammunition, ixesha elijikelezileyo libhekisela kwengubo yangaphandle yesitye kunye neprojekti yayo (ibhola) kunye nomthwalo wayo wangaphakathi (powill) kunye ne-primer cap.
Iibhentshi, ujikelezo lubhekisela kwiplastiki okanye iphepha lebhokisi lebhokisi kunye ne-pellets okanye i-slug iqulethe; kunye nemipu yomthwalo wefostile, umjikelezo ngumthwalo wepowder kunye ne-projectile. Ezi zixhobo ziquka ujikelezo kuphela ukuya kwindawo apho umpu uphunyelwa khona.
Ixesha elijikeleziweyo lihlala ligcinwe kwiyunithi enye yamabutho emipu. Nangona ngamanye amaxesha kusetyenziswa ukubhekisela kwiimbane ezinkulu ezisetyenziselwa iinqwelo zokulwa, ngenxa yalezi zibhamu ezininzi iigobolondo zegama eliqhelekileyo zisetyenziswa ngokuqhelekileyo.
Ixesha elijikeleziweyo akufanele lidideke ngombhobho , obhekisela kuphela kwipropectile yesinyithi ekhawuleza phantsi kombhobho wesikhombisi xa i-trigger isuswe. Inqampu ngokwayo iphela kwinqanaba leenxa zonke ngokukhawuleza xa liqala ukuhamba phantsi kombhobho wesibhamu.
Kukho iingcamango ezininzi malunga nomvelaphi wekota elizeleyo , akukho nanye kubo abonwa njengento ecacileyo:
I-genesis yegama elijikelezayo lingabakho kuba phantse zonke iinqwelo zeekholeji kunye neentambo zebhola ze-shelling ziyi-cylindrical shape, kwaye ngoko ke zingabizwa ngeenxa zonke.
Ekubanjweni kokuqala kwemichilo yemikhosi kwimikhosi yemikhosi, ukudubula isikhali kubandakanye inqubo elandelwayo yokulayisha umpu, ukunyuka kumgca wokukhwela, nokukhupha isikhali xa ufumana umyalelo. Yonke inkqubo yokulayishwa-ukukhwela-ukukhwela yayibizwa ngokuba yijikelezi . Ngexesha elide, ithetha lekota lixinyiwe ukubhekisela kwiyunithi enye yezixhobo.
Ngokomlando, ngamanye amaxesha kwakuthatywayo ukubhekisela ekukhutshweni kweqela lezixhobo zempi ngexesha elifanayo. Ngamaxesha anamhlanje, eli thuba lancinci liye lahlanganiswa neyunithi enye yezixhobo.
Kulo mdlalo we-skeet ukudubula, ixesha elijikelezayo lingabhekisela kwiseshoni ye-25-shot shot.
Yiyiphi i-US eyenza ukulwa nobuGebengu?
Ukuxubusha kunye neNgcinezelo ngesiNgesi
Indlu yeehagu: Iimbali ezimbini ezahlukileyo zikaSus Scrofa
Ngubani uKesare uAgasto?
I-Dilruba: Ravisher of Heart